काठमाडौं- संघीय समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनभित्र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सेटिङ गरेर केही लाभ लिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कांग्रेस र माओवादीले सेटिङ गर्नुभयो, केही लाभ भयो । तर, उहाँहरूमा पनि आपसमा तल मिलेको देखिएन ।’ निर्वाचन निष्पक्ष […]
जनता समाजवादी पार्टीले संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण (सुज) अभियान चलाइरहेको छ । यही अभियानअन्तर्गत जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई केही दिनदेखि गोरखामा छन् । उनले जनता तथा कार्यकर्ता भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् । केही ठाउँ किसानहरूसँग आफैं पनि काम गर्न कस्सिएका छन् । उनले धान चुट्दै गरेको तस्वीर पनि सार्वजनिक भएको छ । कात्तिक २२ बाट सञ्चालित अभियान मंसिर ३ सम्म चल्नेछ ।
सिन्धुली । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघिय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि) को विषयमा बहस आवश्यक नरहेको बताए । उनले एमसिसिका विषयमा राज्यको स्पष्ट नीति हुनुपर्ने बताउँदै नेपाल सरकारको विदेशी सहयोग बन्द गर्ने नीति नभएकाले एमसिसीको विरोध आवश्यक नरहेको बताए । मंगलबार जसपाको सुज अभियान उद्घाटनका लागि […] The post एमसिसीको विरोध आवश्यक छैन : डा. बाबुराम भट्टराई appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्र बिक्रम चन्द विप्लवबीच भेटवार्ता भएको छ । भट्टराई निवासमा भएको भेटवार्तामा भट्टराई पत्नी हिसिला यमी र माओवादीका अर्का नेता धर्मेन्द्र बाँस्ताेलाको उपस्थीति रहेको थियो । राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताएको छ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय रहनु भएका विप्लवले आज […]
ललिता निवास जग्गा प्रकरण- माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णय झिकाउन आदेश
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आज बुधवार कैलालीको टीकापुर जाने भएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा जसपाले आज सबै जिल्लामा जनसभा गर्ने निर्णय गरेको छ । नेता भट्टराईले कैलालीको टीकापुरमा हुने जनसभामा सहभागिता जनाउने छन् । भट्टराईले प्रतिगमनविरुद्ध हुने जनसभामा सहभागी हुन सबैलाई आह्वान गरेका छन् । उनले फेसबूकमा लेखेका छन्, ‘ओली प्रतिगमनविरुद्ध आज (माघ ७ गते) सबै जिल्लाहरूमा हुने जसपाको जनसभामा सहभागी बनौं । ...